mardi 22 septembre 2015 12:30 | | | Affichages : 11882
Azonao ambara ve ny mombamomba anao?
ANDRIAMIHANTA Rina Sitraka Rabeharisoa no anarako, 31 taona (19 Jolay 1986). Rehefa avy nahazo ny marim-pahaizana «baccalaureat serie D» tao amin’ny Lycée Faratsiho dia nanohy ny fianarana teny amin’ny anjery manontolo Antananarivo, tao amin’ny sampana faculté de médecine, département DESMV na ny (Département d’Enseignement des sciences et de Médecine Vétérinaire).
Raha arak’asa dia tompon’andraikitra ara-tekinika ao amin’ny tetikasa FANILO-DIAKONIA mirafitra amin’ny FANILO/SPAM, fiangonana Loterana Malagasy.
Aiza ny faritra iasanao amin’ny fanandratana ny tontolo ambanivohitra?
Ny FANILO/SPAM, dia miasa ato amin’ny Synodam-paritany Avaratrimania, faritra Vakinankaratra. Nohon’ny tombana izay natao ny 2015, dia nisafidy ny hiasa ao anatin’ny fiangonana vitsivitsy izahay, antsoina hoe « fiangonana filamatra ». Miasa ao anatin’ny fiangonana filamatra 129 izahay amin’izao.
Inona no mampiavaka ny FANILO/SPAM amin’ny ivon-toerana hafa?
Ny FANILO/SPAM dia fandrindrana asa ato anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy, mahatonga ny asa isehatra amin’ny endrika maro mahakasika ny fiainan’ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Ny FANILO/SPAM dia fikambanana mirafitra hatrany ifotony isam-piangonana. Tsy manavaka finoana fa ny olona rehetra no hanatanterahina ny asa. Eo ihany koa ny fisian’ny tekinisiana « polyvalent » afaka manatanteraka ny asa.
Inona ny tentikasa ifotoran’ny FANILO/SPAM?
Araka ny efa voalaza eo ambony dia mahenika ny fiainan’ny olona rehetra ny asan’ny FANILO/SPAM. Misy ihany anefa tetikasa 02 lehibe iarahana miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka, toy ny :
FANILO-DIAKONIA, miandraikitra ny fanamafisam-pahalalana ny tompon’andraikitry ny fiangonana isan-tsokajiny (Pastora , Katekista , Filohan’ny sampana…) . Eo ihany koa ny fampiofanana mahakasika ny tontolo ambanivohitra (fambolena , fiompiana,) , ny fanatsarana foto-drafitr’asa madinika.FANILO-CBR, miandraikitra manokana ny olona manana fahasembanana
Fiovaovan’ny toetr’andro: inona no azonao ambara momba izany?
Isan’ny zavatra goavana tsy ho hadinoana tokoa teto amin’ny firenentsika indrindra taty amin’ny faritra misy anay ity fiovaovana eo amin’ny toe-trandro ity. Teo ny tsy fahampian’ny rotsak’orana , teo ihany koa horohoron-tany izay tsy nahazatra ka nanimba foto-drafitr’asa maro. Toy ny trano fonenana maro, indrindra fa tany Betafo. Teo ihany koa ny teto Antsirabe. Ankehitriny koa dia hita taratra ny fisian’ny aretina tsy miseho firy taloha sy ny sisa maro hafa tsy voatanisa , dia vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro izany.
Ny FANILO/SPAM manokana amin’ny tetikasa iarahany amin’ny Fiangonana Loterana eran-tany dia , miezaka mampiofana ireo FANILO isam-piangonana , ny kristiana, ary ny vahoaka manodidina rehetra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany dia hampihenana ny vokatry fiovaovan’ny toetr’andro eo amin’ny lafiny rehetra : ara-tsosialy sy ara-pamokarana.
Nohon’ny fitadiavana mpiara-miombon’antoka sy mpiara-miasa, ankehitriny ny FANILO/SPAM dia miara-miasa akaiky amin’ny WWF- Fandriana. Isan’ny tanjona amin’izany fiaraha-miasa izany ny fanomezana tantsoroka ho an’ny vondron’olona ifotony izay miaro ny tandavan’ala Fandriana Marolambo (distrika Antanifotsy , Fandriana , Marolambo). Tsy araka ny fomba fiteny taloha tokoa hoe « tsy ho ritra tahakan’ny ala atsinanana ». Ankehitriny mantsy nohon’ny fitrandrahana ny ala sy ny harena ara-boanjanahary tsy ara-drariny dia miha-manify ny ala atsinanana sy very miha-tsy hita tamingana ny voary manokana manamarika an’i Madagasikara. Izany indrindra no hiverenana ijerana ifotony ny fiainan’ny vondron’olona ifotony. Mba hamerenana indray ny fikajiana ny ala amin’iny faritra iny.
FANILO/SPAM aiza ho aiza ny fivoarany?
Amin’ny fikendrena fampandrosoana iombonana , ny FANILO/SPAM dia efa misokatra amin’ny fiangonana rahavavy sy ny fanjakana ary mpiara-mombon’antoka hafa mitovy tanjona aminy. Mba hahatrarana ny tanjona dia ny fampandrosoana ny olona rehetra.
Copyright BIMTT © 2013
Birao Ifandraisan'ny Mpampiofana eo anivon'ny Tontolon'ny Tantsaha
Lot. VC 99 2ème étage Villa St Michel Amparibe - Antananarivo 101